Knitting & tenona fitafiana, Sublimation Tshirts, Hoodie - Fanomezana
Tsirairay manatanteraka ny azy asa, vondron'olona iray ny tsara matihanina fifangaroana ny fahaiza-manao mba hanohana anareo mety torohevitra, ianao Aza manahy mikasika ny famolavolana, mba fandaharana sy ny famokarana, ny asa fanompoana.
2 Hours avy hatrany Response
24 ora amin'ny aterineto, haingana valin amin'ny 2 ora, haingana foana noho ny hafa, mba hanome anareo matihanina soso-kevitra sy ny vahaolana.
Manana traikefa feno ho an'ny mpanamboatra sy miasa eo, design / santionany / famokarana / fanaterana fotsiny eo amin'ny orinasa rehetra, dia hanampy anao mba hahazoana antoka mahomby dingana manampahaizana filana, mamonjy anareo izany fotoana, ezaka ary ny ahiahy.
Jiangxi fanomezana Trade Industrial Co., Ltd., no mpanamboatra ny lamba vokatra nandritra ny taona maro, asa amin'ny knitting & tenona fitafiana, Sublimation Tshirts, Hoodie, Hats, Bags, Bandana sns, zava-dehibe ho an'ny fanomezam-pahasoavana, dokam-barotra, varotra, mpiasa , ny fankalazana, zava-nitranga etc.
Famatsiam-bola izahay amin'ny taona 1998, ho toy ny "Nanchang manamorona Hongwei knitting Akanjo Factory". Ary ho toy ny fanitarana ny knitting orinasa, ary ny anankiray tenona Manao orinasa "Nanchang Liqin Akanjo Co., Ltd." ary iray orinasa fanontam-pirinty "Nanchang Baisheng Printing Co., Ltd.", toy ny fampivelarana amin'ny famokarana tanteraka gadra. Izay hanome hery GiftIn mba hanolotra vahaolana feno noho ny mpanjifa.